WOW နဲ့ ပုံစံတူ Crusaders of Light Mobile Game - Myanmar End User
AndroidGamingInternetiPhone & iPadLifestylePC & Mobile
WOW နဲ့ ပုံစံတူ Crusaders of Light Mobile Game
By Myanmar End User April 28, 2017 2603 views
NetEase က နောက်ဆုံး ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Crusaders of Light ဆိုတဲ့ MMO (Massively Multiplayer Online) game နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
NetEase ဆိုတာ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး PC game ဖြစ်တဲ့ World of Warcraft (WOW) ကို ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ Blizzard ရဲ့ ပါတနာ ကုပ္မဏီ တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Crusaders of Light ဟာလဲ WOW ကဲ့သို့ ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့ mobile ပေါ်မှာ ခံစားနိုင်အောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ Crusaders of Light ကို Android နဲ့ iOS နှစ်မျိုးလုံးအတွက် App တွေ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Version 1.0 မှာ Android APK file size အနေနဲ့ 805.8 MB ရှိပါပြီး iOS အတွက်ကတော့ 1.03 GB တောင် ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ ကျား၊ မ အနေနဲ့ ခွဲထားပြီး WOW ကဲ့သို့ Class ၃ မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် warrior (orc), hunter (elf), mage (human) တွေပါ။ Class တစ်ခုစီမှာ talent ၃ မျိုး ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ပြင်ဆင်မှုပိုင်း နဲ့ Social
ပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာ Item တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ဝတ်ရုံတွေ၊ စီးတော်တွေကလည်းပဲ WOW ကဲ့သို့ ရယူပြီး ဆင်မြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Social အတွက် Chat ကို အသံစနစ်နဲ့ရအောင် ဖန်တီးပေးထားပါသေးတယ်။ Game ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Hero ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အနေအထားနဲ့ selfies ဆွဲပြီး Social ပေါ်မှာ ကြွားနိုင်ပါသေးတယ်။
လူအယောက်ပေါင်း ၄၀ကျော် ပါဝင်နိုင်တဲ့ dungeon raids တွေ 1 vs 1 Arena,3vs3Arena တွေနဲ့5vs5Arena တွေကို PvP battles အနေနဲ့ကစားနိုင်မှာပါ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးပါဘူး 25-vs.-25 battleground fights တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်ဖို့ အဖော်ကောင်းတွေ ဘော်ဒါကောင်းတွေ Game ထဲမှာရှာနိုင်မှာပါ။
အောက်ပါ Official website မှာ Preregister လုပ်ထားပါက Point တွေ Gift တွေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ WOW လိုပဲ Item တွေ အရောင်းအဝယ်ပုံစံမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Official website URL: https://crusadersoflight.com/
APK Pure (Android) | Google Play store | iOS
APKPure App ကို ဒေါင်းဖို့လိုတာကတော့ APK Pure က Crusaders of Light ကို xapk ဖိုင်နဲ့ တင်ပေးထားတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ xapk ဖိုင်က OBB Cache Data တွေကို ပေါင်းထည့်ပြီးသား ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် xapk ကို Install လုပ်ဖို့အတွက် xapk install support ပေးတဲ့ Application ဖုန်းမှာ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ APKPure App က xapk ကို Install လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် APKPure ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
NetEase က နောကျဆုံး ဖနျတီးထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Crusaders of Light ဆိုတဲ့ MMO (Massively Multiplayer Online) game နဲ့ မိတျဆကျပေးခငြျပါတယျ။
NetEase ဆိုတာ ကမ်ဘာ့နာမညျကွီး PC game ဖွဈတဲ့ World of Warcraft (WOW) ကို ဖနျတီးမှေးထုတျပေးခဲ့တဲ့ Blizzard ရဲ့ ပါတနာ ကုပ်မဏီ တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ Crusaders of Light ဟာလဲ WOW ကဲ့သို့ ခံစားမှုမြိုးတှနေဲ့ mobile ပေါျမှာ ခံစားနိုငျအောငျ ဖနျတီးပွုလုပျထားတဲ့ ဂိမျး ဖွဈပါတယျ။ Crusaders of Light ကို Android နဲ့ iOS နှဈမြိုးလုံးအတှကျ App တှေ ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ Version 1.0 မှာ Android APK file size အနနေဲ့ 805.8 MB ရှိပါပွီး iOS အတှကျကတော့ 1.03 GB တောငျ ရှိပါတယျ။ ဂိမျးထဲမှာ ကြား၊ မ အနနေဲ့ ခှဲထားပွီး WOW ကဲ့သို့ Class ၃ မြိုးပါဝငျပါတယျ။ အကွမျးအားဖွငျ့ warrior (orc), hunter (elf), mage (human) တှပေါ။ Class တဈခုစီမှာ talent ၃ မြိုး ပါဝငျပါသေးတယျ။
ပွငျဆငျမှုပိုငျး နဲ့ Social
ပွငျဆငျမှုပိုငျးမှာ Item တှေ၊ လကျနကျတှေ၊ ဝတျရုံတှေ၊ စီးတောျတှကေလညျးပဲ WOW ကဲ့သို့ ရယူပွီး ဆငျမွနျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Social အတှကျ Chat ကို အသံစနဈနဲ့ရအောငျ ဖနျတီးပေးထားပါသေးတယျ။ Game ထဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့ Hero ကို မိမိကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အနအေထားနဲ့ selfies ဆှဲပွီး Social ပေါျမှာ ကွှားနိုငျပါသေးတယျ။
လူအယောကျပေါငျး ၄၀ကြောျ ပါဝငျနိုငျတဲ့ dungeon raids တှေ 1 vs 1 Arena,3vs3Arena တှနေဲ့5vs5Arena တှကေို PvP battles အနနေဲ့ကစားနိုငျမှာပါ။ ဒါတငျပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးဘူးပါဘူး 25-vs.-25 battleground fights တှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ အဲ့အတှကျ တိုကျခိုကျဖို့ အဖောျကောငျးတှေ ဘောျဒါကောငျးတှေ Game ထဲမှာရှာနိုငျမှာပါ။
အောကျပါ Official website မှာ Preregister လုပျထားပါက Point တှေ Gift တှေ ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ WOW လိုပဲ Item တှေ အရောငျးအဝယျပုံစံမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
APKPure App ကို ဒေါငျးဖို့လိုတာကတော့ APK Pure က Crusaders of Light ကို xapk ဖိုငျနဲ့ တငျပေးထားတဲ့အတှကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ xapk ဖိုငျက OBB Cache Data တှကေို ပေါငျးထညျ့ပွီးသား ဖွဈလို့ပါ။ ဒါကွောငျ့ xapk ကို Install လုပျဖို့အတှကျ xapk install support ပေးတဲ့ Application ဖုနျးမှာ ရှိရမှာ ဖွဈပါတယျ။ APKPure App က xapk ကို Install လုပျလို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ APKPure ကို အောကျမှာ ဒေါငျးယူပါ။
Facebook Page ရဲ့ Message မှာ Response Assistant ဖွင့်နည်း
21 March, 2020 at 9:06 am
One of my favorite games! Thank you for this post!
October 11, 2017 151507 views
October 12, 2017 114289 views
February 24, 2017 66462 views
November 16, 2016 44674 views